Reer Guuraaga Dijital ah Ku soo dhawow Malta si aad u sii Joogto Ogolaanshaha Deganaanshaha Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabhada Malta » Reer Guuraaga Dijital ah Ku soo dhawow Malta si aad u sii Joogto Ogolaanshaha Deganaanshaha Cusub
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Wararka Jabhada Malta • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Lahaanshaha sawirka MTA/Degenaanshaha Malta
Malta, oo ah jasiirad ku taal badda Mediterranean, waxay hadda soo dhaweynaysaa reer guuraaga dhijitaalka ah ee ka imanaya waddamada aan Yurub ahayn oo leh oggolaansho deggenaansho Nomad oo dhowaan la bilaabay oo loogu talagalay inay siiso muwaadiniinta waddanka saddexaad, oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Kanada, fursad ay meel fog uga shaqeeyaan Malta muddo ku meel gaar ah . Hindisahaani wuxuu u furan yahay codsadayaasha tallaalka COVID-19 oo keliya.
Ogolaanshahan cusub waxaa loogu talagalay in lagu gaaro meelo cusub oo ka baxsan Yurub, maaddaama dhaqdhaqaaqa adduunka uu sii kordhayo oo uu caan ka noqonayo.
Shakhsiyaadka meel fog ka shaqayn kara iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyadda iyo ganacsatada leh kartida socdaalka iyo ogaanshaha dalal iyo dhaqammo cusub waa la soo dhaweynayaa.
Dad badan oo haysta shaqooyin joogto ah oo hadda ka shaqeeya guriga ayaa sahaminaya siyaabaha laysugu darayo habkan cusub ee shaqada iyo safarka muddada fog iyo kan fog.
Malta waxay horey u martigalisay bulsho reer guuraa ah oo dijital ah, oo inta badan ka kooban muwaadiniin EU ah oo aan u baahnayn wax ruqsad ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa awgeed. Ogolaanshaha cusub waxaa loogu talagalay in lagu gaaro meelo cusub oo ka baxsan Yurub, maaddaama dhaqdhaqaaqa adduunka uu sii kordhayo oo uu caan ku noqonayo, COVID-ka dib.
"Malta waxay ku boodday dalabka kordhay ee ka shaqaynta fog ee adduunka, maaddaama masiibada ay beddeshay bar -tilmaameedyadii iyo isbeddello cusub," ayuu yiri Charles Mizzi, oo ah Sarkaalka Sare ee Degenaanshaha Malta, oo ah hay'adda dawladda ee maamusha oggolaanshaha.
“Shakhsiyaadka meel fog ka shaqayn kara iyagoo adeegsanaya teknoolojiyadda iyo ganacsatada leh karti ay ku safraan kuna ogaadaan dalal iyo dhaqammo cusub waa la soo dhaweynayaa,” ayuu sii raaciyay Mr. Mizzi. “Haddii ay jiraan casharro laga bartay masiibada waa in dadku diyaar u yihiin inay guuraan si ka badan sidii hore. Malta waa waddan leh wax badan oo ay ku deeqaan -laga soo bilaabo cimiladeeda wanaagsan iyo hab-nololeedka jasiiradda Mediterranean, ilaa taariikhdeeda hodanka ah iyo dhaxalka, dadka martida loo yahay, kaabayaasha ballaarinta ee aadka u wanaagsan iyo helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka heer caalami ah. Runtii, reer -guuraagu waxay dareemi doonaan inay si sahal ah u dareemaan daqiiqadda ay halkan ka soo degaan. Iyo in Ingiriisku yahay luuqad rasmi ah iyo luuqadda lagu ganacsado, la xiriirka dadka maxalliga ah waxay caddaynaysaa inay tahay hawl fudud. ”
Kuwa doonaya inay ka shaqeeyaan Malta, muddo ku -meelgaar ah illaa hal sano (dib loo cusboonaysiin karo), waa in la tallaalo, caddeeyaan inay ka shaqayn karaan meel fog, oo ka madax bannaan goobta. Waa inay u shaqeeyaan loo -shaqeeye ka diiwaangashan meel ka baxsan Malta, u samee dhaqdhaqaaq ganacsi shirkad ka diiwaangashan meel ka baxsan Malta, oo ay yihiin shuraako ama saamileyaal; ama u fidiso adeegyo madaxbanaan ama la -talin macaamiisha macmiishooda joogtada ahi ay ku yaalliin waddan shisheeye. Geeddi-socodku waa mid toos ah oo deggenaanshaha Malta waxay ballan-qaadaysaa adeeg hufan oo miyir-yaqaanku filayaan.
Johann Buttigieg, oo ah Sarkaalka Sare ee Maamulka Dalxiiska Malta ayaa yiri: "Dadku waa socdaan oo Malta ayaa ka faa'iideysaneysa isbeddelkan caalamiga ah." “Dadka reer guuraaga ah ee dhijitaalka ah hadda ma aha kuwa ku habboon suuqa dalxiiska. Dad badan oo leh shaqooyin joogto ah oo hadda ka shaqeeya guriga COVID-ka kadib ayaa sahaminaya siyaabo lagu mideynayo habkan cusub ee lagu shaqaynayo safarka muddada fog iyo kan fog iyo helitaanka dhaqammada kale. Waxaan aaminsanahay in isbeddelkan ku -meel -gaadhka ah ee ka shaqaynta meel fog laga joogo inuu halkan joogo, sidaa darteed ma jiro wakhti ka wanaagsan kan hadda loogu talagalay soo jiidashada ganacsatada doonaya inay si ku -meelgaar ah u tahriibaan iyo sidoo kale gorgortanka dhaqanka reer -guuraaga dhijitaalka ah ee socdaalka adduunka oo dhan. Malta waa meel ku habboon, badbaado leh, oo ku hadasha Ingiriisiga, jasiiradda Mediterranean. Aaladda kaliya ee loo baahan yahay waa laptop wanaagsan oo isku xira kaabayaasha ballaadhan ee xoogga leh ee dalka oo dhan. ”
Caddaynta Tallaalka: Dadka Maraykanka ah iyo Kanadiyaanku waa inay isticmaalaan app -ka Verifly
WAX KU SAABSAN
VeriFLY waxaa soo saaray oo maamulay xaqiijinta biometric -ka iyo bixiyaha xalka hubinta aqoonsiga, Daon. VeriFLY waxay siisaa socotada hab sugan oo sahlan si loo xaqiijiyo shuruudaha COVID-19 ee ay u socdaan. Ka dib markay ku abuurtay astaan ​​aamin ah barnaamijka VeriFLY, Daon wuxuu xaqiijinayaa in xogta macmiilku ay la jaanqaadayso shuruudaha waddanka oo uu muujiyo baas fudud ama farriin dhicis ah. Farriintan fudud waxay hagaajinaysaa soo gelitaanka iyo geedi socodka xaqiijinta dukumintiga ka hor bixitaanka. App -ku wuxuu kaloo siiyaa dadka safarka ah xusuusinta marka daaqadda safarkoodu ay soo dhowdahay ama marka aqoonsigooda dhammaado. Wax badan ka baro booqashada daon.com/verify.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Ogolaanshaha Deganaanshaha Nomad ee Malta waxaa laga heli karaa residencymalta.gov.mt/overview.
Jasiiradaha qorraxda leh ee Malta, oo ku yaal badweynta Mediterranean-ka, waxay hoy u yihiin diirad aad u layaab leh oo ah hidaha la dhisay, oo ay ku jiraan cufnaanta ugu sarreysa ee Goobaha Dhaxalka Adduunka ee UNESCO meel kasta oo ka mid ah qaran-kasta. Valletta, oo ay dhiseen Knights-kii kibirka lahaa ee St. John, waa mid ka mid ah goobaha UNESCO iyo Caasumadda Dhaqanka ee Yurub ee 2018. Aabbaha Malta ee dhagaxa wuxuu u dhexeeyaa qaab dhismeedka dhagaxa xorta ah ee ugu da'da weyn adduunka, ilaa mid ka mid ah Boqortooyadii Ingiriiska hababka difaaca ee ugu cabsida badan, waxaana ka mid ah isku -dhafka hodanka ah ee dhismaha, diinta iyo dhismaha milatariga laga soo bilaabo qadiimiga, dhexe iyo xilliyadii hore ee casriga ahaa. Iyada oo leh cimilo qorax leh, xeebo soo jiidasho leh, nolol habeennimo oo wanaagsan iyo 7,000 oo sano oo taariikh xiiso leh leh, waxaa jira wax badan oo la arko oo la sameeyo. booqomalta.com